The best imvula alamu zokusebenza | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukwazi ukuthi izokuna nini imvula kubaluleke kakhulu kubo bonke labo okufanele bathuthe noma benze imisebenzi emgwaqweni. Ikakhulukazi ngezikhathi zokungazinzi komkhathi lapho imvula ingana khona emizuzwini embalwa, ukubikezela lolu hlobo lwemvula kuzosisiza ukuthi sihlinzekwe kahle futhi silindele imicimbi.
Ukwazi isimo sezulu ngaso sonke isikhathi, kunezinhlelo zokusebenza ezingomahamba nendlwana njengama-alamu emvula asitshelayo ukuthi izokuna nini. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yiziphi lezi zinhlelo zokusebenza nokuthi zisebenza kanjani?
1 Izinhlelo zokusebenza zeselula zezimvula
1.1 I-alamu yemvula
1.2 Isimo sezulu se-Yahoo
1.4 Isimo sezulu sasendle
Izinhlelo zokusebenza zeselula zezimvula
Namuhla ama-smartphones asebenza njengamakhompyutha wangempela. Idivayisi yalezi zici, iyakwazi ukuthumela irokhethi enyangeni futhi nokho iyatholakala kuwo wonke umuntu. Ngakho-ke, kuyithuluzi elisebenza kahle ukusebenza njenge-meteorologist futhi ukwazi ukubikezela ukuthi izokuna nini.
Ngezansi kunezinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu ze-alamu yemvula nokuthi zisebenza kanjani.
Lolu hlelo lokusebenza luhlobo lwesimo sezulu futhi seluthathe isikhundla ekuklelweni kwezinhlelo zokusebenza zemeteorology ezihamba phambili ze-Android. Kusixwayisa ngomsindo ofana nalowo owenziwe yimvula ukuthi sisesigabeni esiseduze lapho kunemvula khona kanye nemvula. Lokhu kungenzeka ngenxa yemephu yezwe esiza ukuthola indawo esikuyo usebenzisa uhlelo lwe-GPS.
Ngalolu hlelo lokusebenza ungabona uhlobo lwemvula olusondela nge-animation. Ubukhulu bayo bungaziwa ngokuhlukanisa kwayo imibala. Lolu hlelo lokusebenza lusebenzisa idatha enikezwe izinsizakalo zesimo sezulu ngesikhathi sangempela ngokunemba okukhulu.
Iyakwazi ukuxwayisa nganoma yiluphi uhlobo lwemvula, kungaba yimvula, iqhwa noma isichotho. Ungasazisa ngesaziso, ngokudlidliza noma ngomsindo. Yonke imininingwane yemvula ingabonakala ebalazweni lendawo eliyinikezayo, sikwazi ukwandisa indawo eshiwo ukukhetha iphuzu lesithakazelo esifuna ukulazi.
Kubaluleke kakhulu faka uhlelo lokusebenza lweGoogle Maps ukuze lusebenze kahle. Uhlelo lokusebenza futhi liletha amawijethi ahlukene ukubeka imiklamo nosayizi abahlukahlukene ukwazi isimo esivuselelwa njalo. Ngenxa yala mawijethi sizokwazi ukwazi isimo sezulu ngaphandle kokuthi siqhubeke nokuvula uhlelo lokusebenza ngokusetshenziswa kwebhethri elihambisanayo.
Isicelo silusizo kakhulu kuzo zonke izinhlobo zemisebenzi yangaphandle futhi ungahlela indlela ezokwenziwa kusengaphambili. Iphinde isetshenziselwe ukusetshenziswa kwansuku zonke osukwini lwethu nosuku.
Inezinguqulo ezimbili, owamahhala nalowo okhokhelwayo. Owokuqala uletha ukusakazwa. Owesibili awulethi futhi unezinye izici ezengeziwe ezifana nebanga lokutholwa elandisiwe.
Isimo sezulu se-Yahoo
Lolu hlelo lokusebenza lunomklamo oshelele kakhulu. Kangangokuthi iwine indondo kwa-Apple. Iyasazisa ngaso sonke isikhathi ngesimo sezulu futhi inezithombe zendawo ebekiwe ethathwe endaweni yesikhulumi seFlickr.
Lolu hlelo lokusebenza lunokwakheka okuncane kakhulu lapho ungabona kuphela izinga lokushisa ngokushesha nje lapho ulivula. Uma sekuvuliwe, uma sehlisa umunwe wethu phansi, kuzosazisa ngezinga lokushisa ezinsukwini ezimbalwa ezizayo, amathuba okuba nemvula ezindaweni eziseduze nendawo yethu, isikhathi sokuntwela kokusa nokuhwalala, inani lemisebe ye-UV, njll. .
Ukuze usebenze kahle, kumele sibe nendawo ye-GPS esebenzayo.
Isimo sezulu sasendle
Ngalezi zicelo singakwazi ukwazi isikhathi esisilindile ngaso sonke isikhathi nasezindaweni esifuna ukuya kuzo uma sihamba.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » The best imvula alamu zokusebenza